Amagugu Hidden EYurophu Futhi How To Get Kukhona ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Amagugu Hidden EYurophu Futhi How To Get Kukhona ngu zemininingwane
Amagugu Hidden EYurophu Futhi How To Get Kukhona ngu zemininingwane
Zonke izivakashi ziyaphupha mayelana nokuvakashela amagugu afihliwe eYurophu kanye namadolobha amakhulu aseYurophu. Isithombe wabo ngenjabulo imi eduze ne-Eiffel Tower, Colosseum noma uBig Ben kwenza bonke abakhona bazizwe ezehlukile (futhi thina ngokuphelele uthole ukuthi!). Noma ungumuntu Instagram umlutha noma umuntu othanda ukuvakasha "iqiniso", uya izindawo emhlabeni jikelele is everything!
eliyaluzayo bezungeza, ukufuna ukwazi okuthile okungaziwa, ezama ukuhlangabezana amasiko amasha, futhi okuhlangenwe nakho okuthile okuhlukile amahle. Yingakho abahambi yangempela akuzona esabe ukuze uyikhalime indlela. Bathanda ayeke by imizi ngokuvamile abanalo zezindiza kanye musa ukudweba izivakashi eziningi. Lezi amagugu afihliwe e-Europe kungaba ngokuvamile kakhulu ukunikeza isithombe kangcono ezweni elithile European kwanoma yini enye, ukuqonda wesizwe kweqiniso. Ukuvakashela kwabo ngesitimela Cishe le ndlela engcono kakhulu yokujabulela entsha namathafa uhamba zokuphila. Uma umhambi, kulolu hlu ngawe.
Nazi amagugu esizithandayo kufihlwe eYurophu kalula ofinyelelekayo ngesitimela ukuthi ngaphandle kokungabaza kuwufanele bebona.
QAPHELA: Uma ucabanga nge- uya ngebhasi kuqhathaniswa uya ngesitimela – choice kufanele njalo kube ngesitimela.
1. Saxony, i eziphuma Mix of Nature and History kanye nokuzikhethela esasinalo ekuqaleni Hidden Gems EYurophu
Asikho isidingo kuphrojekthi ngokushesha engqondweni ngokwakho Dresden, ngempela. Dresden kuyinto inhloko-dolobha Saxony, kodwa kukhona ezinye izingxenye zale esifundeni esisempumalanga German Kuhle kokusho, kakhulu. ngaphandle nje Dresden iyona Königstein Fortress. Futhi uma ukujabulela ukuhambahamba, uwageje amabhuloho amatshe ayekade akhe kule Saxony esiqiwini. Ngaphezu kwalokho, udinga thembeka kuwe ngokwakho. Kunzima vakashela Germany futhi, okungenani kanye, hhayi eziningi kakhulu besizulu kwezinye imigoqo. Ngenhlanhla, Saxony has idolobha elincane spa ngokuthi Bad Schandau, ephelele detoxing ngemva kobusuku zokudakwa. Gluhwein kufanele futhi kube ohlwini lwakho ngoba iyikhaya emakethe endala Christmas eJalimane. I inethiwekhi isitimela German kuyinto enhle kakhulu kule ndawo ukuze uzothola ukuzwa ke ngokugcwele.
Frankfurt ukuze Dresden Izitimela
Dortmund ukuze Dresden Izitimela
Luxembourg ukuze Dresden Izitimela
Amsterdam Dresden Izitimela
2. Luxembourg City, Esincane, zothando Capital
Into yokuqala efika engqondweni yakho lapho ukhuluma ngani Luxembourg kuyinto amabhange. Izwe Kuyaziwa ncamashi ngoba wabo. Kodwa Luxembourg sika steepled amasonto, izindlu zamatshe, nemisele emincane yenza ukuyihambela kujabulise kakhulu kunalokho obukulindele. Yingakho le ndawo ingenye amagugu ezingavamile ezifihliwe eYurophu phakathi izihloko leli zwekazi sika. Kuyinto indawo enhle, wabeka endaweni lapho Petrusse futhi Alzette emifuleni ukuhlangabezana. Ungavakashela ezinye zokudlela kanye hip Amabha eduze nje endaweni yomphakathi ephakathi. Ngaphezu kwalokho, rue Philippe II has a bunch of izitolo, ngakho kungcono kube ukulungele ukuchitha a bucks ezimbalwa! Sekukonke Luxembourg iyindawo ephelele romantic ngempelasonto.
Koblenz ukuze Luxembourg Izitimela
3. Antwerp: diamonds, Amabhayisikili neBheri angeziwe
Phinda futhi, ngempela Igugu elifihlekile, kodwa kwadingeka thina asho. Isizathu sisobala. Antwerp liyindawo enkulu ukuyeka by yakho uhambo ngesitimela abavela eLuxembourg eNetherlands. Ngaphandle, lo muzi has a lot ukunikela, futhi kufanele ujabule lapho. Uma abanothando ngebhayisikili futhi izakhiwo une ukuthatha "izakhiwo uhambo." Ngenxa yalokhu ibalazwe cool, ungakwazi ukuthola okubekwe obala edolobheni kufomu lakho ozithandayo yezokuthutha. Futhi uma ukhetha into "shinier", hamba hlola Antwerp Ikhaya Diamonds. Ngesikhathi esifanayo, Belgium mkhulu abathandi ubhiya. Kuncike ungomunye, ubambe mug at "De Konick", Antwerp idolobha lapho kudayiswa khona utshwala.
4. Camogli, a True Hidden Gems eYurophu
kuphela 45 amaminithi ngesitimela kude Genoa, ukuthi leli dolobha elincane abadobi akanayo eziningi ekumele ubona. Nokho, kakhulu nalezo aizindawo derrated ukuthi abe amagugu kweqiniso ofihlekile Europe, nakulena kufanele kube ohlwini lwakho. Nge izindlu yayo agqamile ezitaladini emaweni, Camogli kuyinto enhle ukuba bahambahambe eside. Ukuhamba phakathi Camogli, uzoqaphela amahhotela fancy, izakhiwo ezindala, futhi amabhikawozi encane. Unganakile – uzoba ukuthandana nale ndawo! Futhi lapho usukhathele kokuzungeza, akukho kungcono kunokuba kwasemini kwezinye zokudlela kuleli dolobha. Isikhathi esiphelele ukuvakashela Camogli kungaba Meyi, ngesikhathi inhlanzi umkhosi. Ukukhangana main kwalesi sehlakalo pan 28 ton. Isetshenziselwa, wena ukuyichaza ke kwesokudla, ukupheka inhlanzi.
Florence ukuze Camogli Izitimela
Genoa ukuze Camogli Izitimela
ERoma Camogli Izitimela
EMilan Camogli Izitimela
5. Weymouth, a Beach Idolobha e-England ukuvala uhlu lwethu Hidden Gems EYurophu
Kunzima kubhekwe omunye amagugu afihliwe e-Europe uma une dinosaur izinsalela zamathambo eduze nawe. Yup, ulifunda kwesokudla. Dinosaur izinsalela zamathambo zingatholakala ngasogwini Jurassic ka Weymouth. Nokho, ababaningi abantu banquma angu-3 ngesitimela waseLondon ukubabona. Ones ukwenza ungakwazi ukujabulela ezahlukene watersports futhi ube fish and chips ogwini. Noma ukhetha ukudla ezinye gastropub. Kusukela iphawundi kancane phansi okwamanje, yisikhathi ilungelo lokwenza uhambo England. Futhi isikhathi esifanele sokuvakashela iWeymouth kuzoba ngo-Agasti ngesikhathi seWeymouth zomkhosi.
Ingabe thina ukusiza nge izinqumo mayelana nokuthi yiziphi indawo ukuvakashela elandelayo uhambo lwakho oluzayo? Okuhle! Lezi zindawo ezinhlanu kukhona nje isibonelo sendlela khona namanje amanye amagugu yokuzamazama futhi ezifihliwe eYurophu. Izwe ligcwele lezimanga elinde wena bawathole. Ukuhamba ngesitimela uzokunika ithuba ukubona lezi zindawo ngenye. Futhi, uyojabulela uhambo lwakho ngaphezulu. Uma udinga ukusiza uhlela yalolu hambo yakho, noma ufuna ukuthenga amathikithi, sicela usivakashele SaveATrain.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#Camogli #hiddemgems #Saxony #Weymouth Antwerp europetrains europetravel Luxembourg amathiphu isitimela sokuvakasha